९ वर्षका यी साना हेडमास्टर जाे पुरै स्कुललाई पढाउँछन् (भिडियो सहित) – Online Khabar 24
उमेर बच्चाको, लक्ष्य पचपन्नको” ! यो सानो ट्यालेन्ट बच्चा माथि यो लाइन फिट हुन्छ ।
किनकि जुन उमेरमा बच्चाहरु खेलौनासँग खेल्छन् त्यो उमेरमा बाबर अलि नामको यो बच्चा एक स्कूलको हेडमास्टर बन्यो ।
बाबर आज आफ्नै स्कूल चलाउँछन् । ८०० भन्दा बढी बच्चाहरु पढ्छन् । ग्लोबल मिडियाले पनि बाबरको यो प्रगति देखेर अवार्ड दिएको थियो ।
जुन स्कूल मा पड्दैछौ म त्यहाँको प्रिन्सिपल भै सकेको हो। प्राय मान्छेहरुले यो डाईलोग बोल्दै गरेको सुनेको होला तर पश्चिम बंगाल मुर्सिला बाद मा बस्ने बाबर अलि यसको उदाहण हो ।
यो बच्चा गरिबीबाट यस्तो सिक्यो आज ९ वर्षको उमेरमा मा उ हेडमास्टर बन्यो । र उसले आफु जस्तो गरीब बच्चाहरूलाई पढाउन लाग्यो। दुनियाँमा सबै भन्दा सानो उमेरमा हेडमास्टर बन्नेवाला बाबर को कहाँनी इन्ट्रेस्टटिङ छ ।
आज पनि देशमा गरीबिको कारणले धेरै बच्चाहरु राम्रो पढाई को लागि परेका छन् ।बाबर यस्तो बच्चाहरूको लागि उदाहरण बनेर निस्केका छन् ।तपाईं हैरान हुनु हुन्छ यो जानेर की बाबर ले खेल खेल मानै मास्टर बने कसरी ? जब बाबर अलि ९ वर्षका थिए, त्यति बेला उ स्कूल जाँदा आफ्नो उमेरको बच्चाहरु मेहनत मजदूरी गरेको देख्थे।
एकदिन उसले खेल खेल मा आफ्नो साथी हरु लाई पढाउन सुरु गरे आफ्नो पछाडि एउटा सानो आगन मा दुई चार जना साथीहरु लाई बसाएर उसले जे स्कूल मा पढेका थिए त्यो सबै सिकाउँथे तर एक दुई दिन मा यो सानो ट्यालेन्ट बच्चा महसुस गर्न लाग्यो कि उसका साथीहरु पढ्न लेख्न पाउँदैनन् ।
उनीहरूलाई सही शिक्षा दिएनन् भने बाबर भन्छन्। की त्यो दिन उसले उसको साथीहरूलाई पढाउन आफ्नो जिम्मेवारी माने किन की देश को भविष्य उज्वल होस्। समय बित्दै गयो । वरपर का बच्चाहरूलाई पनि बाबर को कुरामा इन्ट्रेस्ट हुँदै गयो ।
उनीहरू पनि यो जान्न खोजेकी उसले बिहान स्कूल मा के सिक्यो के पढ्यो ।यो काम बर्षौं सम्म चली रयो अब बाबर १६ वर्षका भए ।चार बजे उ आफ्नो घर आउँथे र घर मा एउटा घण्टी बजाउने गर्थे त्यो सुनेर सबै बच्चाहरु उसको घरमा आउँथे …. पुरा थाहा पाउन भिडियो हेरौं…
यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevयी ३ राशिका युवतीलाई कहिल्यै नगर्नुहोस् हेला, जिन्दगीभर हुनेछ पछुतो
nextकिन भा’सिँ’दैछ त काठमाडौंको जमिन ? यस्तो छ रहस्य